Global Voices teny Malagasy · news2dago – Momba ny mpandray anjara
Tahiry isam-bolana Jolay 2014 1 Lahatsoratra Jona 2014 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 2 Lahatsoratra
Novambra 2010 1 Lahatsoratra Nanomboka nandika tamin'ny 06 Novambra 2010 · 20 Lahatsoratra	imailaka news2dago	Lahatsoratra farany an'i news2dago 15 Jolay 2014
Adim-pampielezan-kevitra : Kaonty Twitter Rosiana Manakiana ny ” Fandrosoana” ataon'i Etazonia any Iràka Mpanoratra Kevin Rothrock · Eoropa Afovoany & Atsinanana Olona iray manoratra amin'ny teny rosiana no namoaka ny fiantsiana farany tamin'ny aterineto ny governemantan'i Etazonia, raha nanokatra kaonty twitter mitondra ny anarana @IraqProgress.
Didim-pitsarana Manatantara Mampanatrika An'i Brezila Ny Laza Ratsiny Fahiny Mpanoratra Fernanda Canofre · Amerika Latina Telo amby efa-polo taona taty aoriana, manamboninahitra dimy misotro ronono no tsy maintsy nanazava tao amin'ny fitsarana ny fampijaliana, fanjavonana ary fahafatesan'ny solombavambahoaka Rubens Paiva.
Lasa Tsenaben'ny Fanaraha-maso Ara-Teknolojia i Brezila Mpanoratra Pública - Agência de jornalismo investigativo · Amerika Latina Fanararaotran'ireo goavana iraisampirenena momba ny fanaraha-maso nomerika indray i Brezila noho izy mampiatrano ny Mondialy sy ny Lalao Olaimpika.
Shiliana Anjatony Nimenomenona Amin'ny Seho TV Pinochet sy ny Didijadony Mpanoratra Javiera Munoz · Amerika Latina Ny fanakianana ny fandaharana tany Shily no maneho fa mbola voazarazaran'ny zava niseho tamin'ny tantara 40 taona lasa ny firenena.
Brezila: Hanana Lalana Natokana Ho Azy Ireo Ny Mpitaingina Bisikileta ao Fortaleza Mpanoratra João Miguel Lima · Amerika Latina Rehefa nandray an-tanana tamin'ny fandokoana ny lalana ho an'i bisikileta ny mambra ao amin'ny Critical Mass ao Fortaleza, nanaiky amin'ny fomba ofisialy ihany ny mpitondra ny tanana ny farany.
Mamaly ny Hafa-Panavakavahana Mahazo Ilay Oliravina Amerika 2014 Ny Karana Mpanoratra Aparna Ray · Amerika Avaratra Indiana-Amerikanina Nina Davuluri mianajady barazy fenehon-kevitra mifono fanavakavahana eny amin'ny tambajotra sosialy tao aorinan'ny nandreseny the Miss America. Manotany tena moa ny Indianina raha mety haharesy koa izy any India
Fokonolona Zapoteco Namoaka Tambajotram-Pinday Manokana Mpanoratra Rachael Petersen · Mediam-bahoaka Tanana indizena ambanivohitra ao antendrombohitr'i Oaxaca niaraka amin'ny ONG Rhizomatica mba hisantatra tambajotran-tserasera na finday mahaleotena voalohany manerantany.
Shina, Paradisa Vaovao Ho An'ny Mpikarakara Fizahantany Mpanoratra Laurent Delors · Azia Atsinanana Ny isan'ny mpitsangatsangana sinoa 10 tapitrisa ny taona 2000 ary lasa 83 tapitrisa ny taona 2012. Jery akaiky momba io tsena vaovao mivelatra io.
Moske Tsetsenina Ve No Tena Mari-Pamantaran'i Rosia? Mpanoratra Nina Jobe · Eoropa Afovoany & Atsinanana Fihodinana faharoa amin'ny fifidianana toerana fivahinianana tsy dia malaza miisa 10 any Rosia (ka asiana dika mitovy ao amin'ny zaridainan'i Moskoa) nivadika gidragidra ny sabotsy, 31 Aogositra 2013, rehefa notorahan'ny vahoaka ao Grozny atody ny trano fiasana momba ny fifandraisan-davitra.